Vehivavy Meksikana An’arivony Tsy Tafody An-Trano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2016 11:08 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, English, Ελληνικά, عربي, 繁體中文, 简体中文, Español
“Mujeres desaparecidas” (Vehivavy nanjavona). Sary an'i Luis Sandoval ho an'ny El Universal. Fanomezandàlan'ny CONNECTAS.
Tafa iray notontosain'i Daniela Guazo ho an'ny El Universal ity, toy ny ampahany amin'ny fahazoana Vatsimpianarana Mike O’Connor, an'ny Ivontoerana Iraisampirenena ho an'ny Mpanao Gazety (ICFJ) sy ny Hetsika ho an'ny Asan-Gazety Mpanadihady ao Américas, nataon'ny ICFJ niarahany tamin'ny CONNECTAS. Ity dika avoakan'ny Global Voices eto ity dia ampahany amin'ny fifanekena hifampizara votoaty miaraka amin'io media io.
Teo anelanelan'ny 2002 sy 2015 telo arivo ireo vehivavy nanjavona tao an-drenivohitr'i Meksika. Na tsy mahalala izay misy azy ireo aza ny fianakaviany, tsy manary fanantenana ny amin'ny mbola hahitàna azy ireo. Mandritra izany fotoana izany, toy ny “tsy eo” fotsiny no andraisan'ireo manampahefana azy ireny.
Vao haingana i Ana Paola Franco no feno 21 taona, tamin'ity indray mitoraka ity dia nitsoka labozia nohodidinin'ny fianakaviana. Saingy rava ilay fomba. Ao an'efitranony ny fitafiany, ny fandriany ary ireo biby vorodamba. Fahatsiarovana ireo fiainana nodiaviny. Tsy nisy nipika ireo hatramin'ny 9 Febroary 2016. Io no andro farany nandaozan'ilay tovovavy ny efitranony handeha hamonjy fianarana sy nanaovany veloma ny anadahiny tamin'ny teny tsotra hoe ‘rahalina indray mihaona’. Izay tsy efany akory.
Ora 24 taorian'ny tsy nahazoana vaovao mihitsy momba azy, nampidirina taminà taratasy iray ny anarany sy ny sariny ary izay marika mety ahafantarana azy manokana. Tsy zava-baovao ireny taratasy ireny, navoakan'ny Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes (Capea) – Sampan-draharaha ao an-tanànan'i Meksiko miandraikitra ny fikarohana ireo olona nanjavona. Iray amin'ireo tatitra mikasika trangam-panjavonana vehivavy 187 tao an-drenivohitra ny azy, tatitra natao teo anelanelan'ny Janoary sy Martsa 2016.
Nandeha tany amin'ny biraon'ny Ministeram-panjakana tao Tlalpan ny rain'i Ana Paola. Rehefa tonga tao izy dia nihazakazaka namonjy rindrina iray izy nisy ireo fianakaviana nitovy olana taminy: Niteny taminy ireo mpiasan'ny minisitera hoe : “Tokony miandry 48 ora ianao vao manao fanadihadiana satria efa ampy taona izy”. Nandao ilay birao izy, niaraka tamin'ny tahotra hoe tsy hisy olona hikaroka ny zanany vavy.
Sary an'i Luis Sandoval ho an'ny El Universal. Fanomezandàlan'ny CONNECTAS.
Iray amin'ireo anarana mameno ilay angondrakitra misy ireo olona nanjavona tao an-tanàna ny anaran'ity tanora ity. Nataon'ny Sampan-draharaha momba ny Asa fanaovan-gazety mikirakira Angondrakitra ao amin'ny El Universal ny tsy maintsy hitohizan'ny fahazoana mijery ireny lisitra ireny ao amin'ny pejin'ny Lehiben'ny Fampanoavana ao amin'ny Fitsaràna Federalin'ny Distrika hatramin'ny Martsa 2016, mba hanisàna hoe vehivavy firy no karohana ao an-drenivohitra.
Amin'ireo tatitra 6.878 izay ananan'ilay tranonkala hatreto, vehivavy ny 3.054. Fanoratana isantaona nanomboka ny 2002 ary nifarana ny 2015. Manome toky i José Antonio Ferrer, talen'ny Capea, hoe avaozina tsy mitsahatra ny zavatra ao amin'ilay tranonkala ary rehefa misy olona hita dia esorin-dry zareo tsy ho ao amin'ilay pejy intsony.
Mijotso, manaraka ny laharana ny teny hoe “TSY HITA”. Io fanondroana io dia milaza fa maherin'ny olona telo arivo no tsy raharahain'ireo tomponandraikitra ao an-drenivohitra. Very fanahy i Ferrer teo am-pamaritana ny andraikitry ny andrim-panjakana:
Tena tsy hainay ny hoe tsy hita. Olona very sa tsy hita ry zareo.
Anatin'ny enina amin'ireo folo misoratra ao amin'ny tranonkalan'ny Capea, izany hoe 1.972, dia ankizivavy eo anelanelan'ny 13 sy 20 taona no hita farany. 44 % amin'ireo tranga ireo no hitan'ireo delagasiona Iztapalapa, Gustavo A. Madero sy Cuauhtémoc.
Teo anelanelan'ny 2009 sy 2011, 300 teo ny salanisa isantaona amin'ireo tranga tsy nahitam-baliny. Tamin'ny 2012 , feno 432 ny isan'ireo tatitra miresaka vehivavy nanjavona tsy tafody an-trano. Ilay tarehimarika, izay toa tsy hidina velively, dia nahitàna fitomboana be. Tamin'ny 2015 ny lisitr'ireo anaran'ireo dia nahitàna vehivavy 522 izay tsy mbola hita, araka ny angondrakitra azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny Capea.
El Observatorio Contra La Trata De Personas Con Fines De Explotación Sexual del Distrito Federal ( Fanarahana Maso Ny Fanondranana Olona sy ny Fanandevozana Olona Ho Amin'ny Filan'ny Nofo) dia nampitandrina hoe tsy te-hanazava ny zavamisy mihitsy ireo manampahefana. “Manomboka mampiroborobo ny fanondranana olona ao aminy ilay tanàna, ary minia tsy mijery ny governemanta”, hoy i Gerardo Nava sy Víctor Núñez, mpikambana ao amin'io fikambanana io izay efa efatra taona no nanaovany fanadihadiana an'ireny tranga ireny.
Fa ho an'ireo reny, ny fanontaniana sarotra ahitana valiny dia ny hoe mandra-pahoviana no tsy hitsahatra tsy hikaroka. Hoy i Alma Estela, renin'i Ana Paola, miteny am-pilaminana saingy arahan-dranomaso :
Tsy hitsahatra izahay. Na omena vatana iray hitomaniako azy aza, fa ilaiko fantatra hoe aiza ny zanako vavy.
Samy mifikitra amin-javatra iray ny tsirairay ao amin'ny fianakaviana Franco Aguilar. Hafatra iray farany. Ny fahatsiarovana ireo fotoana fiarahana mijery sarimihetsika rehefa faran'ny herinandro. Ny sakafo maraina iraisana: “Efatra monja izahay”, hoy ny rainy. Voatery hino i Oscar hoe indray andro any mbola hiverina hitambatra indray izy efatra ireo.
Raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ny toedraharaha iainan'ireo fianakaviana an'arivony ary te-hahita ny endrika tsirairain'ireo nanjavona, dia tsidiho ny multimedia manokana natao ho amin'izany Ausencias Ignoradas.
Raha hamaky manontolo ilay tatitra dia potsiro eto (Es.):